NongHyup Finance Myanmar
No (230/4), Pinlone Road, (30) Ward, North Dagon Tsp. Near of East-West Parami Hospital.
Branch Accountant (လပွတ္တာ ၊ ဝါးခယ်မ)
Posted on 06/12/19 3:08 by NongHyup Finance Myanmar
NongHyup Finance Myanmar Co.,Ltd is Hiring!!Job Title - Branch Accountant (M/F)Job Location - လပွတ္တာ ၊ ဝါးခယ်မလိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများစီးပွားရေးဘွဲ့ (သို့) LCCI Level (3)Diploma ဘွဲ့ရရှိရမည်။အသက် (၂၂-၃၀)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။Microfinance လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။လူမှုဆက်ဆံရေး၊ လေ့လာသင်ယူမှု ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကောင်းမွန်ရမည်။တာဝန်ချရာ မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။Microfinance Accounting Process များကျွမ်းကျင်နားလည်မှု ကောင်းမွန်ရမည်။
Junior Loan Officer (လပွတ္တာ၊ ဝါးခယ်မ)
Posted on 06/12/19 3:02 by NongHyup Finance Myanmar
NongHyup Finance Myanmar Co.,Ltd is Hiring!!Job Title - Junior Loan Officer (M/F)Job Location - လပွတ္တာ ၊ ဝါးခယ်မလိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်။အသက် (၂၅-၃၀)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။လူမှုဆက်ဆံရေး၊ လေ့လာသင်ယူမှု ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကောင်းမွန်ရမည်။တာဝန်ချရာ မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။ဒေသတွင်း ဗဟုသုတပြည့်စုံရမည်။ရုံးတည်ရှိရာ မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပါက ပိုမိုဦးစားပေးမည်။လစာနှင့် အခြားခံစားခွင့်များ ကောင်းမွန်မည်။
Loan Officer (လပွတ္တာ ၊ ဝါးခယ်မ)
Posted on 06/12/19 2:58 by NongHyup Finance Myanmar
NongHyup Finance Myanmar Co.,Ltd is Hiring!!Job Title - Loan Officer (M/F)Job Location - လပွတ္တာ ၊ ဝါးခယ်မလိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်။အသက် (၂၅-၄၀)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။Microfinance လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၂)နှစ်ရှိရမည်။လူမှုဆက်ဆံရေး၊ လေ့လာသင်ယူမှု ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကောင်းမွန်ရမည်။တာဝန်ချရာ မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။ဆိုင်ကယ်ကျွမ်းကျင်စွာ စီးတတ်ရမည်။ယခင်အလုပ်မှာ ထောက်ခံစာ တင်ပြနိူင်ရမည်။
Senior Loan Officer (လပွတ္တာ၊ ဝါးခယ်မ)
Posted on 06/12/19 2:57 by NongHyup Finance Myanmar
NongHyup Finance Myanmar Co.,Ltd is Hiring!!Job Title - Senior Loan Officer (M/F)Job Location - လပွတ္တာ ၊ ဝါးခယ်မလိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်။အသက် (၂၅-၄၀)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။Microfinance လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၃)နှစ်ရှိရမည်။လူမှုဆက်ဆံရေး၊ လေ့လာသင်ယူမှု ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကောင်းမွန်ရမည်။တာဝန်ချရာ မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။ဆိုင်ကယ်ကျွမ်းကျင်စွာ စီးတတ်ရမည်။ယခင်အလုပ်မှာ ထောက်ခံစာ တင်ပြနိူင်ရမည်။
Branch Manager ( လပွတ္တာ၊ ဝါးခယ်မ)
Posted on 06/12/19 2:49 by NongHyup Finance Myanmar
NongHyup Finance Myanmar Co.,Ltd is Hiring!!!Job Title - Branch Manager (M/F)Job Location - လပွတ္တာ၊ ဝါးခယ်မ)လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။အသက်(၃၀-၄၅)နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။Branch Manager (Microfinance ) ရာထူးဖြင့် လုပ်သက် အနည်းဆုံး (၃)နှစ်ရှိရမည်။Recommendation Letter တင်ပြနိူင်ရမည်၊ဆိုင်ကယ်ကျွမ်းကျင်စွာစီးတတ်ရမည်။ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းပိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအား ကျွမ်းကျင်နားလည်မှုရှိရမည်။ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အသွေး ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အရည်အသွေးများပြည့်စုံရမည်။ကွန်ပျူတာ ၊အင်္ဂလိပ်စာ များကျွမ်းကျင်ရမည်။Management Team ဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိူင်ရမည်။တာဝန်ချရာ မြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။လစာနှင့် အခြားခံစားခွင့်များ ကောင်းမွန်မည်။
Internal Auditor (Any Where)
Posted on 05/12/19 23:46 by NongHyup Finance Myanmar
Job Title- Internal Auditor Job Loacation - Any Whereလိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများအသက် (၂၇ မှ ၃၅ )နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။B.Com or Any Graduated with LCCI (III) တတ်မြောက်ထားရမည်။Microfinance Auditing အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၃)နှစ်ခန့်ရှိရမည်။Auditing Knowledge , Reporting Process များအား ကောင်းစွာ ကျွမ်းကျင်နားလည်မှုရှိရမည်။ကွန်ပျူတာ ။ အီမေး များကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိူင်ရမည်။ဌာနခွဲများသို့ ခရီးသွားလာနိူင်ရမည်။Management Team နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိူင်ရမည်။
Communication Associated (Yangon)
Posted on 04/12/19 2:52 by NongHyup Finance Myanmar
NongHyup Finance Myanmar Co., Ltd is currently looking for Communication Associate with attractive salary packages and benefits.1. Communication Associate (1) PostJob RequirementMust be graduated with BA (Korean)Must be age between 25 to 30.Must have at least (1) Year experience in the related field.Communication, Cooperation must ...
Branch Manager ( ဝက်လက်၊ မြိုင်၊ ကျောက်တန်း၊ ခရမ်း၊ မှော်ဘီ)
Posted on 22/10/19 4:09 by NongHyup Finance Myanmar
လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။အသက် (၃၀- ၄၅)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။Branch Manager (Microfinance)ရာထူးဖြင့် လုပ်သက်အနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိရမည်။Recommendation Letter တင်ပြနိူင်ရမည်။ဆိုင်ကယ်စီးတတ်ရမည်။ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းပိုင်း ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ကျွမ်းကျင်နားလည်မှုရှိရမည်။ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အရည်အသွေးများ ပြည့်စုံရမည်။ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ရမည်။Management Team ဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိူင်ရမည်။တာဝန်ချရာမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။လစာနှင့် အခြားခံစားခွင့်များကောင်းမွန်မည်။
Internal Auiditor ( ရန်ကုန်)
Posted on 22/10/19 4:00 by NongHyup Finance Myanmar
လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများအသက် (၂၇-၃၅)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။B.com or Any Graduated with LCCI (3)ဖြင့်ပြီးပြီးထားသူဖြစ်ရမည်။Microfinance Auditing အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃)နှစ်ခန့်ရှိသူဖြစ်ရမည်။Auditing Knowledge / Reporting Process များအားကောင်းစွာ ကျွမ်းကျင်နားလည်မှုရှိရမည်။ကွန်ပျူတာ ၊ Email များကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိူင်ရမည်။ဌာနခွဲများသို့ ခရီးသွားလာနိူင်ရမည်။Management Team နှင့်ကောင်းမွန်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိူင်ရမည်။လစာနှင့် အခြားခံစားခွင့်များ ကောင်းမွန်မည်။အပတ်စဉ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များအားလုံးရိုံးပိတ်သည်။လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပေါါမူတည်၍ လစာ၊ အကျိူးခံစားခွင့် ကောင်းမည်ဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းနှင့် ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ဆောင်လုပ်ကိုင်လိုသူ ဖြစ်ရမည်။လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ တာဝန်ချရာ မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိူင်ရမည်။Email ဖြင့်လည်း လျှောက်ထားနိူင်သည်၊
Contact NongHyup Finance Myanmar